Intle iKhabhinethi Getaway, iMountain Lakes, NH
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJesse
Indawo yokubaleka kwikhabhinethi eWhite Mountains, NH. Ifakwe kuluntu lwaseMountain Lakes, yindawo efanelekileyo yokonwaba ngaphandle. Ungaloba, uqubhe, uhambe, utyibilike uze ubuyele kwikhaya elitofotofo. Hlala kwidesika kwaye ukhethe ezintabeni okanye wonwabele ukuhlangana ngomlilo eyadini. Ukuhamba ngokulula ukuya emachibini. Kufuphi neendlela zeATV kunye neemoto zekhephu. Ndwendwela iidolophu ezikufuphi zaseLincoln, eLittleton, eFranconia eneendawo zokutyela ezininzi kunye nemisebenzi
Ikhabhinethi yethu ikwindawo yaseMountain Lakes apho unokonwabela omane amaxesha onyaka ngokulinganayo!
Siyakwazi ukufikelela kuwo omabini amachibi. Ichibi eliPhezulu lihamba ngemizuzu emibini ukusuka kwikhabhinethi. Ungaloba elunxwemeni. Ichibi elisezantsi yi-10 min ukuhamba apho unokufikelela kwiilwandle, izikhephe kunye namaphenyane. Thatha inqanawa uyoloba okanye uyonwabele usuku lobuvila lokugcakamela ilanga elunxwemeni. Ungayidlala i-volleyball yaselwandle, ibasketball kunye nentenetya kuba iinkundla zilapho. Emva komdlalo, xuba echibini.
Ikwindla inika imibala emihle yamagqabi kunye nemozulu egqibeleleyo yokuhambahamba. I-Black Mountain Trail, iMount Gardner Lone Oak Trail ikufuphi nokunye okuninzi eFranconia Notch.
Ubusika bubonelela ngokutyibilika ekhephini kunye ne-snowboarding kwiNtaba yeLoon enomtsalane oyi-30 min xa uqhuba. Okanye wenze nje ikhabhinethi ibe yindawo yokuhlanganisana kuhambo lwakho olulandelayo lokuhamba ngekhephu.
4.87 · Izimvo eziyi-190
Iyafumaneka ngemibuzo ngefowuni (umbhalo okanye umnxeba) okanye iAirBnB app.